Maxkamad ku taalla Turkey-ga oo warqadii lagu soo xiri lahaa u jartay wadaadka Fethullah Gulen – The Voice of Northeastern Kenya
Maxkamad ku taalla Turkey-ga oo warqadii lagu soo xiri lahaa u jartay wadaadka Fethullah Gulen
Maxkamad u fadhigeedu yahay wadanka Turkey-ga ayaa warqaddii lagu soo xiri lahaa u jartay wadaadka caanka ah ee uu fadhigiisu yahay dalka Mareykanka ee lagu magacaabo Fethullah Gulen.
Mr Gulen ayey dowladda Turkey-ga ku eedeysay in uu masuul ka ahaa isku dayga afgambigii dhicisoobay ee 15-kii bishii July ee la soo dhaafay ka dhacay dalka Turkey-ga.
Wakaaladda wararka Anadolu eeku hadasha afka dowladda ayaa soo tabisay in maxkamadda saldhigeedu yahay magaalada Istambul ay shalay oo khamiis ahayd ku dhawaaqday amarka lagu soo xirayo wadaadkaasi si uu u wajaho dacwad ka dhan ah.
Xukuumadda Ankara ayaa hadda dooneysa in dowladda Mareykanka ay dhinaca Turkey-ga u soo dhoofiso Mr Gulen oo horay u ahaan jiray siyaasi ay aad isugu dhawaan jireen madaxweynaha dalka Turkey-ga Recep Tayyip Erdogan balse ay markii dambe is khilaafeen.
Dhinaca kalena Fethullah Gulen ayaa isagu iska fogeeyay in uu wax ka ogaa afgambiga fashilmay ee ay sameeyeen ciidamada Milatariga dalka Turkeyga.
Qalalaase daba socday inqilaabkaasi dhicisoobay ayaa waxa ku dhintay in ka badan 270 qof, iyadoo ay laamaha ammaanka ee dowladda Turkey-gana sameeyeen howlgallo baaxad leh oo lagu bartilmaameedsanayay saraakiisha soo abaabushay afgambiga.
← Keriako Tobiko oo doonaya in xabsi daa’in lagu xukumo nin loo heysto dhoofinta foolasha marooodiga
Madaxa maamul goboleedka Kiambu oo lagu wado in uu maxkamadda kasoo hor muuqdo →